Hamiga Shacabka oo Caqabado Culus loo dhigay, Maxayse Madaxda Qaranku Shacabka ugu soo bandhigi la’ yihiin Caqabadaas,? – Hornafrik Media Network
Hamiga Shacabka oo Caqabado Culus loo dhigay, Maxayse Madaxda Qaranku Shacabka ugu soo bandhigi la’ yihiin Caqabadaas,?
By HornAfrik	 On Jul 9, 2017
Madaxweyne Farmaajo, Ra’iisul wasaare Kheyre aad bey u wanaagsan tahay qudbooyinka wadaniyaddu ka muuqato oo shacabka Soomaaliyeed uga jeediyaan xafladaha. balse waa maxay sababta ay uga qarinayaan Shacabka Shirarka Golaha lagu magacaabo Amniga Qaranka iyo doodaha ka socda oo dhabar jabka ku ah Qaranimada Somalia,
qodobadaas oo kala ah:-
1- Dib u dhiska ciidanka Xooga dalka.
2- Dhamaystirka Dastuurka.
3- Qilaafka Dawladdaha Carabta.
Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyadda qaarkood ayaa xiliyadda ay ka hadlayaan xafladaha sida furitaanka Baarlamaanka ku hadla waxa shacabku rabo. balse shirarka aan saxaafadda iyo shacabka loo soo bandhigin ee Dawladda Somalia kala dhaxeeya mawqifkoodu yahay mid caqabad ku ah Soomaaliya in ay noqoto dawlad sharaf leh oo kamid ah dawladaha Caalamka.
Caqabadda Dawladda Somalia oo shacabku taageeray loo dhigay ayaa ah qorshaha loogu yeero “National Security architecture ” qorshahaas oo ah mid ku salaysan in Somalia aysan dib cagaheeda isugu taagin, maadaama Madaxweyne Farmaajo iyo Raysul wasaare Kheyre aqbaleen qorshaha ajnabiga wato oo dib u dhiska ciidamada xooga dalka lagu fashilinayo, sidoo kalana Madaxda Dawladda Federalka ee Baarlamaanka Somalia doortay awoodooda lagu wiiqayo. kadib markii ay aqbaleen in la sameeyo Golaha Amniga Qaranka oo uu gudoominayo Madaxweynaha Somalia, xubnana ka yihiin Madaxweynayaasha Dawlad goboleedyadda, iyadoona Golahan uu ku shaqaynayo inaysan Awood yeelan Hay’adaha Dastuuriga ee Dawladda Somalia.
Dawladda Farmaajo & Kheyre ayaa dawladda Turkey oo ah dawladda kaliya ee Somalia la dooneysa in dib cagaheeda ugu istaagto ka cagajiidaya inay si dhab ah wax ula qabsadaan.
Turkey oo saldhig Milateri ka sameystay Deegaanka Jazeera, halkaas oo ay doonayaan inay ku tababaraan Ciidamadda Qalabka Sidda ee Somalia ayeey Muuqataa in Somalia ay ka door bidayso Dalal aan ugu hiilinayn sida Ankara.
Xog: Cumar C/rashiid oo wareejinaya Xubinimadda Aqalka Sare, Maxay tahay Sababtu..?
Shirka Golaha Wasiirada oo markii u horeysay todobaadkan ka dhacaya meel ka baxsan Muqdisho